Musiyano uripo pakati peSMR, CMR, LMR uye PMR hard disk: zvine chekuita neLinux? | Linux Vakapindwa muropa
Zvakanaka, mhinduro yekukurumidza kuzita iri kwete. Asi zvinogona kunge zvisina kudaro zvachose, asi tinofanira kutanga pakutanga. Uye ndiwo mazwi aya LMR, SMR, CMR uye PMR unogona kuvanzwa nekuwedzera. Kunyanya kana iwe uri kutsvaga kutenga iyo magnetic hard drive (HDD) uye iwe uri kuyedza kubvunza nezve tekinoroji kusarudza yakanaka.
Chokwadi iwe waona kuti nguva pfupi yadarika pane zvakawanda zvekutaura nezve SMR tekinoroji ye zvinotyaira zvemazuva ano. Semuenzaniso, Wester Dhijitari, kana WD, ichangoburitsa mitsetse yeRed Plus neRed Pro ayo ari ega CMR, uye akafanirwawo kubuda kuzoratidza matambudziko nezvikamu zvaro zveSMR. Asi ndeapi aya ese mazita? Misiyano ipi iripo? Izvo zvine hukama neLinux kana kwete? Yese mibvunzo iyi ndichaedza kujekesa ...
1 Misiyano pakati peLMR, CMR, PMR uye SMR
2 Uye chii chine chekuita neLinux?
Misiyano pakati peLMR, CMR, PMR uye SMR
Musoro wemusoro & Chainrings: Seagate Medalist ST33232A
Chinhu chekutanga iwe chaunofanirwa kuziva ndechekuti HDD yakaoma dhiraivha, ndokuti, magineti kana mechina iwo, shandisa magnetism senzira yekunyora nekuverenga iyo data iri pamusoro pemadhiski.
LMR vs PMR kana CMR
Pasina kupinda mune zvakadzama zvakawanda nezve kuumbika kwemidziyo, uye zvimwe zvinhu, ini ndinoenda ndakananga kusiyanisa nzira idzo dzinowanikwa ndangariro dzinoitwa. Ndokunge, iyo mhando dzeMMS (Magnetic Kurekodha) zviripo:
Longitudinal (MRL): Iyo mhando yekuchengetedza dhata uko kwainochengeterwa kureba pamusoro penzvimbo yediski. Iyo yakaoma dhisiki musoro inozokwanisa kuita magineti nzvimbo yacho neimwe nzira kana imwe (kuchamhembe-kumaodzanyemba) kuitira kuti igadzire iwo pamwe nemazero eiri ruzivo rwebhinari. Iyo ndiyo yakasarudzika nzira yekuti ruzivo rwakachengetedzwa sei kune akaomarara madhiraivha
Perpendicular (PMR): Seagate yaive yeimwe yekutanga kushandisa tekinoroji iyi kune madhiraivha akaoma kubva pa750 GB kugona. Yakanga iine mukana wakajeka pamusoro peLMR kubvira, zvichinyatsojeka, dhata rega rega raitora nzvimbo shoma uye rumwe ruzivo rwunogona kuchengetwa pane imwechete diski pamusoro. Uye zvakare, inopisa zvishoma nekuchengetedza iyo info munzvimbo dzakajairika uye dzakagadzikana nzvimbo.
Zvakajairika (CMR)- Vamwe vese vagadziri vakatanga zvakare kushandisa PMR kune avo madhiraivha akaomarara, ndosaka zvakaguma zvave kuita mune ino dhiraidhi indasitiri. Ndokusaka yaidaidzwa kuti CMR sezvo yaive yatopararira uye yakajairika. Asi zvakafanana ne PMR.
Shingled (SMR): nekurwira kusingaperi kwekuwana dhata yepamusoro pasikweya mita, kukwanisa kugadzira madhiraivho akaomarara nekuwanda uye huwandu huwandu hwakaenzana hwemahwendefa uye saizi, tekinoroji yeSMR yakagadzirwa zvakare. Rudzi rwekurekodha rwunosiyana nerekare nekudzedzereka. Mune mhando yeiyi tekinoroji, musoro wemuverengi unoshandiswa uyo uri mudiki pane iwo wekunyora musoro, uye marata e data akaiswa pamusoro peumwe neumwe. Izvi zvinowedzera mukana wekutora mamwe data munzvimbo imwechete yeyuniti, ndiko kuti, kuwanda kunowedzera. Dambudziko nderekuti zvinogona kuitika kuti rwiyo rwakadhindwa kana uchiedza kudzima kana kugadzirisa data rakachengetwa, izvo zvinotungamira kuhuwori hwe data. Nzira yekugadzirisa dambudziko iri ndeyekunyora iyo yese data inofanirwa kuchinjika mune rakaparadzana chikamu uye kana paine nguva dzepasi pekushandisa kwedhisiki rakaomarara, rinotarisira kugadzirisa zvakare data. Chinhu chakafanana nezvinoitika mumaSSD ane TRIM uye nekuwedzeredza-kupihwa (kuwedzeredza). Asi izvo zvine matambudziko, nekuti akati wandei anonyora anofanirwa kuitwa kana aine mamwe matekinoroji chete 1 inofanira kuitwa ... nekudaro, kuwedzera kwehuwandu mune ino kesi kune mutengo maererano nekunyora zvikwereti.
Muchidimbu, mu iwo madhiraivhu akaomarara izvo zviri kutengeswa, chero iwo maratidzi aari, unogona kuzviwanira iwe CMR kana SMR. Semuyenzaniso:
Seagate- Nyowani Barracudas kubva 1TB kusvika 8TB kazhinji SMR. Ipo iyo Ironwolf kazhinji iri CMR.
Toshiba- Mazhinji emota yavo 1TB kusvika 6TB anowanzo kuve SMR. Vamwe vakaita seX300, P300 uye N300 kazhinji CMR.
Western Digital: ine akasiyana kwazvo akasiyana, aine Red nhepfenyuro inosanganisa SMR uye CMR. Iwo matsvuku Pro ari CMR, Bhuruu musanganiswa, Nhema ari CMR kazhinji aine mashoma kunze, uye Purple ari CMR.
Uye chii chine chekuita neLinux?
Zvakanaka, chinhu chekutanga ndechekuti Linux irimo mune mazhinji maseva, uye zvakare mune akawanda supercomputer. Uye izvi zvinoshandisa marongero e Kuchengetedza RAID. Masisitimu akawandisa "haawirane mushe" neSMR. Pachinhu chidiki, ivo vanofanirwa kuziva kana vaine maMPR ekutyaira kana kana ivo vakasanganiswa nemamwe marudzi emadhiraivha akaomarara. Zvikasadaro, ivo vanogona kukonzera zvakakomba matambudziko.
Ziva kuti ne RAID inoshandiswa kunyora panguva imwe chete muzvikamu zvakawanda panguva imwe chete. Semuenzaniso, muRAID 1 (girazi kana girazi), zvese zvakanyorwa kune rakaomarara dhisiki A rakanyorerwawo B kuti uve nekopi chaiyo yedhata uye kana ikatadza imwe yeanotyaira, imwe backup ...
ari shanduko muSMR zvinogona kuita kuti ma disks aya atore nguva yakareba kuti anyore data maringe nekushandisa CMR-chete RAID masystem. Nekudaro, kune RAID masisitimu uko kwavo kwese madhiraivha ari maSMR uye pasina dambudziko rakawandisa, asi zvakakosha kuti vashandi vehunyanzvi vakazvipira kutsiva anotyaira muRAID system vanoziva izvi.
Pane zviitiko zvinoshanda, zvakaita seDropbox gore rekuchengetedza maseva uko maodhi ane maSSD uye maodhi ane HDD SMR anoshandiswa. Asi pane hunyengeri, havasi pamwe chete, asi maSDD anoshandiswa sechinhu chinogumbusa kana cache kumhanyisa mhanyisa uye kana vaine 1GB vanoenderera vachinyora mumablock mana e4MB emaHDD. Naizvozvo, zvinowirirana, asi hazvisanganise ...
Muchokwadi, vamwe vanhu vakatenga madhiraivha akaomarara eNAS neRAID kumisikidza uye iyo nyowani dhiraivha yaive SMR, vakaona matambudziko achioneka achimaka madhiraivha se "akashoreka" kana akaona sei kuvaka zvakare kwakatora nguva yakareba kupfuura zvakajairwa kana uchitsiva imwe HDD unit neimwe.
Asi kunze kweiyo RAID system, pane rimwe dambudziko hombe reSMR, uye iri XFS faira system, zvakare inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzeLinux. XFS inoshandiswa zvakanyanya muNAS, uye inokonzeresa kuti pese paunoda kunyora chikamu che4KB zvinoreva kuverenga nekunyorazve 256 MB yese. Izvo zvinoita kuti mari yekuchinjisa ive yakaoma chose.
Mhedziso, yerudzi urwu rweRAID matekinoroji iwe unofanirwa kudzivirira kusanganisa SMR neCMR uye yeNAS iwe unofanirwa dzivisa kushandisa XFS. Asi pachezvangu, ndinokurudzira kuti usarudze iyo CMR uye nekudaro udzivise zvisingakwanisike uye nemusoro ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Musiyano uripo pakati peSMR, CMR, LMR uye PMR hard disk: zvine chekuita neLinux?